Phezu Kwamakhansila eHarare, iMDC-T Isixotshise Amakhansila eMDC Alliance eBeitbridge loMayor weGwanda
Phezu kokuxotshisa amakhansila eMDC Alliance alitshumi eHarare izolo, ibandla leMDC-T lixotshise njalo amakhansila eBeitbridge amathathu abalisa okaWard 4 uMnu Morgan Ncube, uGranger Nyoni okaWard 5, uNkosazana Angeline Tore okaWard 6 kanye loMayor weGwanda uMnu Jaston Mazhale.
Iziphathamandla zeMDC-T zithi zithethe inyathelo leli ngemva kokuba amakhansila lawa etshengise ukuthi kawasekeli ibandla lazo.
I-Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) yazise ngeviki edluleyo ukuthi zonke izikhala esezivulekile kumakhansili lasephalamende ngezizatho ezigoqela ukuxotshwa kwamalunga eMDC Alliance zizavalwa ngokhetho lwama-by-elections oluzakwenziwa mhlaka 5 kuMpalakazi.
Omunye wamakhansila axotshwe eHarare, uMnu Thamsanqa Hadebe uthi kabalandaba lokuxotshswa kwabo ngoba bazavotelwa njalo kukhetho oluzayo.
Ingxoxo loMnu Thamsanqa Hadebe
Obengumeya weGwanda yena uMnu Jaston Mazhale uthi ukhethe ukuma lomholi weMDC Alliance uMnu Nelson Chamisa labantu abamkhethayo kulokulandela uNkosazana Thokozani Khupe leMDC-T yakhe, bona athi bayalwa ngabantu kukhetho olwedluleyo.
Amazwi kaMazhale lakaHadebe agcizelelwe yisikhulumeli seMDC Alliance uMnu Felix Magalela Mafa Sibanda yena othi ukuxotshwa kwamakhansila abo kuveza sobala ukuthi iMDC-T isebenza leZanu PF ngenjongo yokudiliza ibandla lakhe.
Kodwa isikhulumeli seMDC-T uMnu Khaliphani Phugeni ukulandule lokhu esithi amakhansila la azixotshile ngokwala ukusekela ibandla labo.